Kala duwan oo ku saabsan iPhone | Wararka IPhone (Bogga 8)
Tweetbot 4 waxaa lagu cusbooneysiiyay miirayaal iyo waxyaabo yar oo cusub
Tweetbot 4, oo la cusbooneysiiyay subaxnimadii maanta iyadoo suurtagal ah in la isticmaalo miirayaal si firfircoon u maareeya tweets.
Apple wuxuu ku guuleystey khaladka 53 ee dacwada dayactirka Touch ID
Ma xasuusataa Khalad 53? Hagaag, Apple waa laga dacweeyay arrintaas, laakiin garsoore ayaa xukumay in waxa dhacay uusan ahayn khaladka Cupertino.
Fikradda smartwatch qaybsan. Tartanka mustaqbalka ee Apple Watch?
Fiidiyowgaan waxaad ku haysataa fikrad ah smartwatch qaybsan, taas oo ah, waxaan ku dari karnaa qaybaha aan dooneyno. Apple Watch khatar ma ku jiraa?
Dropbox hadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad iskaaniso dukumiintiyada iyo waxyaabo kale oo badan
Cusboonaysiintaan cusub ee hadda lagu sii daayay macruufka "App Store", 'Dropbox' ayaa hadda kuu oggolaanaya inaad dukumiintiyada iskaan ku sameyso.
Kuwani waa 72 Emojis cusub oo imanaya iOS 10
Actualidad iPhone waxaan ku soo qaadaneynaa kooban 72 Emojis cusub oo lala heli doono iOS 10.
Microsoft Flow wuxuu yimaadaa iOS si uu ula tartamo IFTTT
Microsoft, oo si buuxda ugu lug leh qalabka heerka shaqada, ayaa hadda soo saartay qalabkeeda Microsoft Flow ee loogu talagalay iOS.
Instagram waxay jabisaa xayiraadda isticmaaleyaasha 500M
Instagram waxay jebisaa xayiraadda 500M ee isticmaala iyadoo in ka badan 300 oo bille ah oo firfircoon, shabakadda bulsheed ee moodada ah waxay sii wadaa inay sii kororto
Horudhaca xisaabta, bilaash wakhti xadidan
Codsiga aan maanta ku tusno oo bilaashka loogu soo dejisan karo waa Hordhac ku ah xisaabta carruurta ka yar shan sano
Apple wuxuu helaa qoriga Emoji oo laga saaray Unicode 9
Haddii markii Emoji cusub ee Boqortooyada 9 uu yimaado aadan arkin emoji qoriga, waa inaad ogaataa in Apple ay ku cadaadiyeen inaysan ku darin hub badan Unicode.
"Lagu Qabtay Galaxy S7" Nuqul ka umpteenth ee Samsung
Samsung ayaa hadda bilowday olole loogu magac daray "Captured on Samsung Galaxy S7", kaas oo si lama huraan ah noo na xusuusinaya Apple "Shot on iPhone".
Wallapop ayaa cusbooneysiisa oo wanaajisa sheekada si muuqata
Wadahadalka 'Wallapop chat' waa mid ka mid ah qaybaha muhiimka ah isla markaana isla waqtigaasna kii ugu xumaa soo maray, hase yeeshe, cusbooneysiintan ugu dambeysay waxay umuuqataa inay xalka saareen.
Dareenka ugu horreeya lix maalmood kadib iOS 10
Waxaan kuu sheegeynaa sida aan ku helnay adeegsiga iOS 10 usbuuc kadib usbuuc kasameynta sida ugufiican ee nidaamka mobilada cusub ee Apple ku shaqeeya.
Sawirada Agora, ka faa'iideyso sawirradaada adoo iibinaya
Sawirada Agora ayaa noo ogolaanaya inaan sawiradan kula wadaagno hab lacag celin ah, taas oo ah, waxaan u iibin karnaa sawiradeena si fudud oo dhaqso leh.
Apple wuxuu shaqaale uhelaa Bakhaarkii ugu horreeyay ee Apple ee Mexico
Haddii ay dhacdo in qofna qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan furitaanka soo socda ee Dukaanka Apple ee ugu horreeya Mexico, Apple waxay durbaba raadineysaa shaqaalaha dukaanka
Tani waa sida ciyaarta kubbadda cagta ee qarsoon loo hawlgaliyo Facebook Messenger
Waxaan kuu sheegeynaa sida loogu ciyaaro cayaartan kubbadda cagta adoo adeegsanaya Facebook Messenger adoo dadaalaya inaad isha ku dhufato Euro 2016 ee Faransiiska.
Miyey khalad ku ahayd Apple dhinaceeda in aysan bilaabin iMessages for Android?
Miyey khalad ku ahayd Apple dhinaceeda in aysan bilaabin iMessages for Android? Waxaan si faahfaahsan u falanqeyneynaa doorashadan ugu dambeysay ee Apple u diiday Android.
Tani waa sida ay u shaqeyso Sawirka Telegram ee sawir-gacmeedka iPhone-ka
Tani waa sida ay u shaqeyso Sawirka Sawirka ee iPhone-ka, in kasta oo la filayo in iOS 10 lagu sii kordhin doono waxaan sidoo kale isticmaali karnaa PiP-ka ku jira menu-ka.
Apple wuxuu ku guuleystey patent-ka iPhone oo leh shaashad duuban oo 360º ah
Dhamaadka qalooca ayaa ka yimid Samsung, laakiin muuqaalka wareegga wareegga wuxuu noqon karaa waxa Apple, maxaa yeelay waxaa la siiyay shati hore.
WWDC 2016 soo bandhigida muhiimka ah ee hada laga heli karo iTunes
Shirka ugu horreeya ee WWDC 2016 halkaas oo Apple ay ku soo bandhigtay sheekooyinka macruufka 10, macOS Sierra, tvOS 10 iyo macOS 3 ayaa hadda laga heli karaa iTunes
IOS waxay ka saareysaa "Swipe To Unlock" Sagaal sano kadib
Apple waxay macsalaameyneysaa sheekada quraafaadka ah ee "slide in lagu furo" sagaal sano kadib, iyadoo loo badalayo "riix badhanka bilowga si loo furo
Ogeysiisyada cusub ee iOS 10 oo faahfaahsan
Waxaan kuu soo bandhigeynaa ogeysiisyada casriga ah ee macruufka 10, shaashadda qufulka ayaa ahayd mid ka mid ah riwaayadihii waaweynaa ee iOS-kan.
Khadadka dhaadheer ee WWDC, sida markay tagayaan inay iibsadaan iPhone
Waa waqti yar ka hor inta uusan WWDC bilaabmin! Sugitaanku wali wuu sii dheeraan doonaa, laakiin wuu sii dheerayn doonaa kuwa sameeya safka dheer ee la sameeyay.
BMW waxay ku taageeri doontaa CarPlay qeybta M3 iyo M4
BMW waxay ku dhaaratay jacayl aan loo bogin CarPlay waxayna ku dari doontaa ikhtiyaarka BWM oo leh qalabka M3 iyo M4. Qiimaha lama shaacin, laakiin waxay noqon doontaa mid dheeri ah.
Cristiano Ronaldo: Kick'n'Run, wuxuu ku guuleystey France iyo Koobka Qaramada Yurub
Cristiano Ronaldo: Kick'n'Run waa ciyaar fiidiyoow ah oo madadaalo leh oo cinwaankeedu yahay Euro Cup laakiin wuxuu diiradda saarayaa xiddiga kubadda cagta adduunka, CR7.
Apple horeyba wuxuu uqarxiyaa Moscone West ee WWDC 2016
Moscone West horeyba waxay u bilaabatay in lagu qurxiyo istiraatiijiyad u dhiganta Apple WWDC 16, diyaarna u ah dhacdada.
Hadda waxaad ka xusi kartaa farriimaha WhatsApp, GIF-yada soo socda
Nidaamka farriinta ee WhatsApp ayaa horeyba kuu oggolaanaya inaad ku sheegto farriimaha ku jira IOS, isla markaana isku-dhafka GIF-yada barnaamijka ayaa dhawaan bilaaban doona.
Motorola Moto Z oo aan lahayn 3.5mm jack Hadda waa maxay?
Motorola waxay dhowaan soo bandhigtay Moto Z-keedii cajiibka ahaa, oo leh astaamo u gaar ah oo umuuqda in aan la dareemin, iyada oo aan lahayn jaakad 3.5mm Waxaan falanqeyneynaa sababta.
Tim Cook wuxuu u kacayaa booska 8aad ee ka mid ah maamulayaasha aadka loo qiimeeyo
Tim Cook wuxuu u kacayaa booska 8aad ee agaasimayaasha aadka loo qiimeeyo, iyadoo la ogolaaday 96% dhammaan shaqaalihiisa sanadkii la soo dhaafay.
Shazam hadda waxay keydisaa baaritaanka haddii aanan laheyn wax xiriir ah
Waad ku mahadsantahay cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Shazam waxaan keydin karnaa raadinta, si aan u sameyn karno markaan xiriir leenahay.
Falanqeeyayaashu "waxay saadaaliyaan" dhamaadka kororka taleefannada casriga ah
Xitaa falanqeeye "wuu sii saadaaliyaa", haddii aad sidaa ku sii dhejin karto hadda, in kororka iibka taleefannada casriga ahi uu dhammaan doono sannadkan.
Waa tan sida ay u ekaan karaan iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus
Haddii aad rabto inaad aragto waxa iPhone 7 ee la soo bandhigi doono bisha Sebtembar u ekaan karaan, fiiri qaabkan. Qashin ma leh.
Beta-ka hore ee watchOS 2.2.2 wuxuu la imanayaa kuwa labaad ee tvOS 9.2.2 iyo OS X 10.11.6
Galabtii cusub ee noocyada beta: oo ay weheliso nooca labaad ee iOS 9.3.3, nooca labaad ee tvOS 9.2.2, OS X 10.11.6 iyo nooca koowaad ee watchOS 2.2.2 ayaa sidoo kale yimid.
La soco dhamaan Euro-ga Onefootball Euro 2016
Onefootball Euro 2016, si aadan u seegin gabi ahaanba faahfaahinta Euro 2016 ee lagu qabtay Faransiiska.
Shalay iTunes, iCloud iyo App Store ayaa shaqadii joojiyay
Mar labaad galabnimadii, waqtiga Isbaanishka, server-yadii Apple waxay ku noqdeen dhibaatooyinkii hawlgalka, oo ah wax caan ku ah muddooyinkan dambe
Agaasimaha Guud ee Jawbone Debunks Xanta isagoo leh wuu joojin doonaa iibinta Quantifiers
Madaxa Jawbone, ayaa hada daabacay maqaal uu ku beeninayo macluumaadka ku dhawaaqay isbedelka jihada shirkada
Elon Musk wuxuu rajeynayaa Apple inay heshiisyo toos ah la gasho Tesla
Elon Musk ayaa sidaas darteed aaminsan in wiilasha Cupertino ay tahay inay heshiisyo toos ah la galaan iyaga haddii ay doonayaan inay wax ka dardaarmaan suuqan.
Fannaaniinta waxay ku baaqayaan in wax laga beddelo sharciga xuquuqda lahaanshaha si loola dagaallamo budhcad-badeedda YouTube
Fanaaniinta waxay rabaan in sharciga xuquuqda lahaanshaha wax laga badalo si looga hortago in shaqadooda laga afduubto YouTube, oo ah bogga ugu caansan ee ku saabsan fiidiyowyada.
TVOS App Store wuxuu qariyaa barnaamijyo aan horey u rakibnay
Waxay umuuqdaan inay isbadal kusameynayaan tvOS App Store. In muddo ah, waxay bilowday inay qariso codsiyada aan rakibnay.
Kharashka lagu dayactiray Union Square Apple Store wuxuu ahaa $ 19 milyan
Dib u habeynta Apple Store ee Union Square ee San Francisco waxay ku kacday 19 milyan oo doolar
Soo dejiso sawir-gacmeedka nashqadeynta Star Wars
Ma waxaad tahay taageere Star Wars? Ma jeceshahay Qeybta VII: Awakens Force? Ha seegin fursadda oo soo dejiso sawir-qaadayaashan cusub.
Tani waa sida wanaagsan ee iOS 9.3.3 uga shaqeeyo iPhone 5
Waxaan kaaga tagi doonaa isbarbardhigaan fiidiyowga ah ee waxqabadka iOS 9.3.2 iyo iOS 9.3.3 ee iPhone 5, go'aan ka gaar naftaada haddii aad cusbooneysiin doonto iyo in kale.
Apple waxay raadineysaa qareen khibrad u leh asturnaanta caafimaadka iyo HIPAA
Asturnaanta ayaa muhiimad weyn u leh Apple waxayna raadineysaa khibrad khibrad u leh HIPAA iyo qareen u gaarka ah arrimaha caafimaadka.
Dhagax dixeed 2 iyo dhagax dixeed Time 2, smartwatches cusub ee shirkadda
Pebble waxay soo bandhigtay laba nooc oo cusub, dhaxal dabiici ah moodellada hadda jira oo leh astaamo cusub oo muhiim ah marka loo barbar dhigo kuwii hore.
Sida ku cad shatigan, Apple waxay rabtaa inaan ku xakameyno gawaarida IPhone-ka
Tilmaamo dheeri ah: Shahaadadan Apple waxay soo jeedineysaa in mustaqbalka aan awood u yeelan doonno inaan ka xakameyno howlaha qaarkood ee baabuurtayada iPhone.
Jilaa Hindi ah ayaa u sheegay Tim Cook inuu sugayo "Apple VR"
Jilaaga Emraan Hashmi ayaa la kulmay Tim Cook isbuucii hore wuxuuna rajeynayaa aalad: Apple VR. Miyaynu ku arki doonnaa WWDC?
Maxaan u necbahay iPhone-kayga
Waxaan u qoondeynaynaa qodobkaan nacaybka, si aan u falanqeyno mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha aan necebnahay ee ku saabsan iPhone-ka, ama ugu yaraan, si loo fahmo sababta aan u neceb nahay.
BitTorrent waxay rabtaa inay bedesho sharciyada ciyaarta telefishanka waxayna ku dhawaaqday bilaabida BitTorrent Live, kanaalka telefishanka.
Patent cusub wuxuu muujinayaa xiisaha Apple ee ah in lagu daro Aqoonsiga taabashada shaashadda iPhone
Patent cusub ayaa laga soo saaray Apple kaas oo uu ku qeexayo aalad leh ID ID oo shaashadda ku duugan. Goorma?
Habemus Paella Emoji! Imaatinkaaga dambe ayaa la xaqiijiyay
Haa Haa Haa! Horaa loo xaqiijiyay in cusbooneysiin ay dhowaan imaan doonto, Unicode 9, oo ay kujiraan Paella Emoji oo aad loo codsaday lana doonayo.
CurrentC, mustaqbalka tartanka Apple Pay, wuxuu dib u dhigaa daah-furkiisa mar kale
CurrentC, oo ah adeeg bixinta mobilada ee kula tartami doona Apple Pay, ayaa dib u dhigtay daah-furkiisa mar kale. Goorma ayey imaan doontaa (hadday ahaan lahayd)?
Laba injineero Apple ah ayaa u safraya guriga dadka ay saameeyeen tirtirka maktabadda iTunes
Laba injineer oo ka tirsan shirkadda Apple ayaa u safray guriga dadka ay saameeyeen tirtirka heesaha Apple Music si ay u arkaan waxa dhacay.
Twitter wuxuu qorsheynayaa inuu joojiyo tirinta xiriiriyeyaasha iyo sawirrada illaa 140 xaraf
Sida laga soo xigtay Bloomberg, Twitter ayaa joojin doonta tirinta sawirrada iyo noocyada kale ee xiriiriyeyaasha ah ee ku saabsan xaddidaadda astaamaha 140. Laakiin miyay?
Apple wuxuu horeyba uga shaqeyn lahaa iPhone-ka oo leh lacag la'aan wireless ah
Sida laga soo xigtay wararka xanta ah, Apple wuxuu horeyba uga shaqeyn lahaa inuu soo saaro iPhone oo leh fiilo dhab ah oo wireless ah, taas oo ah, bilaa fiilooyin iyo masaafo fog.
Daraasad la soo saaray ayaa lagu sheegay in Android laba jibbaartey macruufka IOS
Sida laga soo xigtay daraasad dhowaan la sameeyay, barnaamijyada Android waxay ku fashilmaan laba jeer sida ugu dhakhsaha badan barnaamijyada iOS. Ma runbaa?
Boqorka Xisaabta 2, waa bilaash waqti xadidan
Codsiga la heli karo ee laga soo dejisan karo bilaash maanta waa King of Xisaabta 2, oo lagu qiimeeyo 1,99 euro
Magaalada Los Angeles waxay yeelan doontaa Apple Store cusub
Xanta ugu dambeysa waxay umuuqataa inay muujineyso in magaalada Los Angeles ay noqoneyso magaaladii ugu dambeysay ee lagu helo Dukaan Apple ah oo gacmo furan ku socda.
Chagupatrol: Samatabbixinta, bilaash ah wakhti xaddidan
Codsiga bilaashka ah ee aan maanta ku tusineyno waa Chaguipatrulla Al Rescate, oo ah buug 3D dhexgal ah oo u oggolaanaya kan ugu yar guriga inuu is dhexgalo
Tikniyoolajiyadda IMessage-ka ayaa ku kici kara Apple 2.800M
Apple ayaa wajahaysa dacwad cusub. Munaasabaddan, shirkadda codsaduhu waxay noqon doontaa Voip-pal iyo sababta loo dalbado, iMessage.
Maamulayaasha Bandhigga Japan waxay aad ugu baahan yihiin Apple si ay ugu boodaan bandhigyada OLED si ay uga gudbaan khasaarihii ay sameeyeen 2015.
Apple Pay waxay ku koraan Kanada, bangiyada cusub iyo kaarar badan
Inbadan oo hay'adaha deynta ah iyo sumadaha kaararka deynta ayaa ku biiraya barnaamijka lacag bixinta ee Apple ee Kanada.
Foxconn waxay warshad u diyaarisaa aaladaha Apple ee Hindiya
Shirkadda Foxconn ayaa ka dhisi doonta dalka Hindiya warshad 10.000 bilyan oo doolar ah. IPhone 7 ma lagu samayn doonaa wadan aan Shiinaha ahayn?
Viv waxay muujineysaa kaaliyeheeda cusub ee dalwaddii ah
Viv ayaa shalay soo bandhigtay kaaliyeheeda cusub ee dhanka dalwada ah waxayna soo bandhigtay waxa ay awoodo, laakiin ma waxay ka fiicnaan doontaa Siri mise waxay u baahan doontaa inay horumariso?
Screenshots-ka Apple Music-ka cusub ee loo yaqaan 'iTunes' ayaa soo ifbaxay
Screenshots-ka waxa uu noqon lahaa Apple Music-ka cusub ee loogu talagalay iTunes nooca 12.4 oo soo muuqan doona bisha Juun ayaa la sii daayay.
Waalidiinta Siri Viv waxay isku diyaariyaan inay soo saaraan shey kale oo sirdoon farsameysan
Abuureyaasha Siri, Viv Labs ayaa isku diyaarinaya inay soo bandhigaan shaqadooda ku saabsan sirdoonka farsamada, kaaliyaha cusub ee farsamada.
TSMC waxay dhameystireysaa naqshadeynta A11. Waxay noqon doontaa 10nm wuxuuna diyaar noqon doonaa horaanta 2017
TSMC waxay durbaba dhameystireysaa naqshadeynta processor-ka A11 oo iPhone 7s uu isticmaali doono. Waxay noqon doontaa 10nm waxayna diyaar u tahay wax soo saar ballaaran bilowga 2017.
Tufaaxa ugaarsiga loogu jiro meel lagu horumariyo gaariga Apple
Apple waxay raadineysaa meel ballaaran oo ku filan oo ay ku sii wadi karto ka shaqeynta gaarigeeda Apple Car, waa howl dhib badan sida ay u baahan tahay.
Periscope sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad keydiso barnaamijyada in ka badan 24 saacadood
Twitter ayaa cusbooneysiiyay adeegga fiidiyowga ee tooska ah ee loo yaqaan 'Periscope live streaming video' si loogu oggolaado dadka isticmaala inay keydsadaan dhammaan baahinta
Guuldarro raadinta App Store waxay muujineysaa natiijooyin aan sax ahayn oo ku saabsan macruufka iyo Mac
Waqtigan xaadirka ah, App Store wuxuu la kulmayaa cillad meesha natiijooyinka raadinta aysan muujin waxa ay tahay inay sameeyaan.
Weerarka Hacker wuxuu waxyeeleeyaa malaayiin akoonno emayl ah; waqti aad ku badasho lambarka sirta ah
Weerarka jabsiga ayaa jabinaya tobanaan milyan oo ah Gmail, Yahoo, iyo xisaabaadka emaylka ee 'Outlook', iyo kuwo kale. Waqtiga la beddelayo lambarka sirta ah
PieMessage: Apple's iMessage on Android [Muuqaal]
Ma rabtaa inaad la sheekaysatid iMessage laakiin aad haysatid qalab Android ah? Hagaag, mashruuca isha furan PieMessage ayaa kaa caawin kara.
Twitter wuxuu bilaabayaa Isku xirnaan, hab cusub oo lagu helo akoonno la raaco
Twitter-ka ayaa hada bilaabay howl cusub oo loogu magac daray Connect taas oo noo ogolaaneysa inaan helno qof aan raacno si fudud oo fudud.
Sidee farriinta degdega ahi u beddeshay habka aan wax u qorno
Waxaan falanqeyneynaa sida dhalinyarada u waafajiyeen xeerarka qorista hababka cusub ee wada xiriirka, bartaan fahamkooda iyo la qabsiga.
Radio Colombia wuxuu idaacadaha reer Colombia kuugu keenayaa taleefankaaga iPhone-ka ah
Shaki la'aan, codsiyada raadiyaha waxay kuxiran yihiin taleefannada iphone ee isticmaalayaasha badankood, tan iyo ...
Dowlada India uma ogola Apple inay iibiso aaladaha dib loo hagaajiyay
Apple waxay isku dayday inay sameyso dalab khatar ah si ay ugu iibiso taleefannada dayactirka ee Hindiya, waana wax aysan dowladda Hindiya jecleyn.
Khariidadaha Apple waxaa ku jira macluumaadka taraafikada ee Rio de Janeiro
Apple ma dooneynin inay iloobaan adeegsadayaasha khariidadaha Apple, waxayna ku darsadeen macluumaadka taraafikada magaalada Rio de Janeiro.
Apple waxay rabtaa xiriiradayadu inay ogaadaan goorta tooshaantu ay wax qabadkeeda sameysay
Yaanay dhicin in si toos ah uu go'aansado inuu eray beddelo oo uu dhibaato nagu geliyo? Patent-ka Apple ayaa raba inuu ka fogaado dhibaatadan.
WhatsApp: kuwani waa wararka ay qorsheeyeen
WhatsApp waa waddo aad u dheer oo laga bilaabo ahaanshaha codsiga fariimaha ugufiican, laakiin wararka ay umuuqato inay kujiraan goor dhow waxay keeneen inay aad isugu dhawaadaan.
Maalinta Hooyada ayaa soo socota, sii xoogaa barnaamijyo ah ama filimaan ah
Sida aad u siiso iTunes ama kaarka Spotify jirka ah, waxaad si toos ah ugu hibeyn kartaa app hooyadaada, si fudud adigoo mid ah.
FBI-da ayaa shaaca ka qaaday macluumaadka ugu horreeya ee ku saabsan dayacanka iOS iyo OS X ee Apple
Waqti badan ayey ahayd, laakiin horey ayey u dhacday: FBI-da ayaa la wadaagaysa Apple macluumaad ku saabsan dayacanka nidaamyadooda markii ugu horreysay.
CloudMagic ayaa cusbooneysiisa oo ka saarta taageerada iOS 7
Maanta CloudMagic waxay heshay casriyeyn muhiim ah oo lagu daray wararka dalbaday iyo baabi'inta taageerada iOS 7 si joogto ah.
Nokia waxay ku iibsaneysaa shirkada ‘Forings’ lacag dhan 170 milyan oo euro
Sida u eg wararka maanta, Nokia waxay ku iibsatay Withings $ 192 milyan. Maxaa ka cusub aragtida?
MacBookga cusub ee 12 ″ wuxuu udhaxeeyaa 5% iyo 18% dhaqso
Jaangooyooyinka soo bandhigaya MacBooks-ka cusub ee 12 "waxaan ka helaynaa awood ilaa 18% ka sarreysa oo leh noocyada cusub ee processor-rada.
Pegatron wuxuu u ogolaanayaa saxafiyiinta inay booqdaan wershadooda iphone markii ugu horeysay
Markii ugu horreysay taariikhdeeda, Pegatron waxay u oggolaatay saxafiyiinta inay booqdaan warshaddii ay isugu uruuriyaan taleefanka Iphone-ka. Ma waxbaa is badalaya?
Badbaadayaasha - lumay Honduras, show dhab ah oo ka socda iPhone-kaaga
Waxaan kuu sheegeynaa badbaadayaasha - lumay Honduras, barnaamijka badbaadayaasha ugu caansan ee App Store.
Spotify jabsaday. Waa inaad bedesho erayga sirta ah hada
Ma isticmaashaa Spotify? Beddel eraygaaga sirta ah, si dhakhso leh! Adeegga waa la jabsaday oo xogta isticmaalaha ayaa lagu daabacay Pastebin.
InkHunter, iskuday sawir gacmeedyo ku yaal App Store
Guushan App Store waxaad awoodi doontaa inaad iskudaydo taatuuga muuqaalka ah uguna mahadcelinta tikniyoolajiyadda dhabta ah ee la kordhiyay gebi ahaanba bilaashka ah.
Waxay ku eedeynayaan Google inay ku qasbeyso soo saarayaasha Android inay ku soo daraan barnaamijyadooda
Brussels waxay ku eedeysay Google, hada Alphabet, inay ku qasbayso dadka sameeya qalabka Android inay ku daraan barnaamijyadooda barnaamij ahaan.
Apple, Google iyo Microsoft waxay Daabacayaan Warqad Furan Iyagoo leh Sharciga Kahortaga Qarsoodiga "Lama Shaqeyn Karo"
Dagaalka u dhexeeya shirkadaha tiknoolajiyada iyo sharci fulinta ayaa sii socda. Shalay waxay daabaceen warqad ay ku dhaleeceynayaan sharciga ka hortagga sirta.
Apple waxay shaqaaleysiisaa dhowr takhasus gaar ah adduunka mootada
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Apple ay kiraysatay Tesla Motors hore iyo shaqaale Aston Martin ah si ay uga shaqeeyaan gaariga Apple.
Banco Popular ayaa si guul leh u cusbooneysiisay barnaamijkeeda iPhone
Banco Popular ayaa ugu dambeyntii cusbooneysiineysa barnaamijkeeda moobiilka si ay u siiso khibrad adeegsade la jaanqaadka waqtiyada hadda jira
TSMC waxay u diyaarisaa 7nm processor-ka iPhone 8?
Weli waa xilli hore in laga hadlo iPhone 2018, laakiin TSMC waxay horey u qorsheysay inay sameyso 7nm processor oo imaan kara iPhone 8.
Android N ayaa durbaba diyaarinaysa la qabsiga 3D Touch
Nidaamka hawlgalka mobilada ee Google wuxuu durba bilaabay inuu qaato astaamo 3D Touch u gaar ah oo ku jira Android N betas.
Gaariga Apple-ka waxaa lagu farsameyn karaa magaalada Magna ee dalka Austria
Warbixin ayaa xaqiijineysa in gaariga Apple ay soo saari doonto Magna, shirkad sidoo kale mas'uul ka ah soo saarista BMW Mini.
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa 12-inch MacBook: processor cusub, RAM badan iyo midabyo cusub
Waxay ahayd sir furan, laakiin ma aanan ogeyn goorta ay dhici doonto. Apple waxay soo saartay 12-inch MacBooks ah oo leh astaamo iyo midabbo cusub.
Wicitaanada fiidiyowga ee WhatsApp ayaa la xaqiijiyay inay run yihiin, laakiin goorma?
Mid ka mid ah howlaha ugu badan ee la filayo ee WhatsApp waa suurtagalnimada wicitaannada fiidiyowga. Goorma ayey imaan doonaan? Waxay umuuqataa inay waqti dhow yeelan doonaan.
Apple wuxuu daadiyaa taageerada QuickTime ee Windows
Apple ayaa joojin doonta taageerada nooca Windows-ka ah ee QuickTime. Sababta ayaa ah in ay heleen laba cayayaan oo ay ka daaleen sixitaankooda.
Magacyada Apple Magacyada Mashruuca Titan Dhismayaashiisa Laga Soo Bilaabay Caqiidooyinka Griiga
Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, Apple wuxuu magacyada tiirarka quraafaadka Giriigga ku dhejinayaa dhismooyinka la xiriira Mashruuca Titan ee Apple Car.
FBI-da ma aysan siinin Cellebrite, laakiin waxay siisay koox "koofiyad cawl" si ay u furto argagixisada iPhone 5c
Xanta ayaa haysay in FBI-da ay lacag siisay Cellebrite si ay uga caawiso furitaanka iphone 5c, laakiin hadda waxaa la sheegay inay u tagtay koox koofiyad cawl leh.
Hadda waxaad ku diri kartaa (kudhowaad) dhammaan noocyada dukumiintiyada WhatsApp
Haddii aan dib u jaleecno, ma dhihi karno horumarka WhatsApp waa gaabis yahay. Qarsoodi ka dib, waxaan hadda soo diri karnaa dhammaan noocyada dukumiintiyada.
IOS 9.3.2 Beta 1 waxay hagaajisaa cilad ku jirta Xarunta Ciyaarta
Falanqaynta ugu dambeysay waxay soo werisay in cayayaankaan Game Center-ka ah lagu hagaajiyay beta-kii ugu horreeyay ee dadweynaha ee iOS 9.3.2
Codsiga cusub ee Evo Banco wuxuu ku guuleystey qaabeynta iyo amniga
Astaamo badan oo cusub iyo isdhexgalka isticmaale ee dib loo habeeyay ayaa weheliya arjiga cusub ee Evo Banco si ay ula jaan qaadaan tartanka.
Jeebka waxaa lagu cusbooneysiiyaa horumarro badan oo cusub
Jeebka ayaa dhowaan la cusbooneysiiyay iyadoo la adeegsanayo astaamo cusub oo ku filan oo lagu sii wado noo oggolaanaya inaan aqrinno qodobbada iyo wararka aan ugu jecel nahay.
Apple waxay tiri FBI-da ayaa laga yaabaa inay sidoo kale furto Brooklyn iPhone
Ka dib markii ay soo gashay iPhone 5c ee San Bernardino toogte, Apple ayaa hadda sheegaysa in FBI-da ay marin u heli karaan iPhone-ka kiiska Brooklyn.
Cellebrite wuxuu leeyahay waxay ku dhowdahay in la jabiyo iPhone 6
Cellebrite oo ah shirkadii furatay San Bernardino toogteyaasha iPhone 5c, ayaa sheegtay inay ku dhowdahay inay sidan oo kale ku sameyso iPhone 6.
Dowladda Mareykanka waxay sii wadi doontaa inay riixdo furitaanka taleefannada iphone
Haddii qof uun u maleeyo in dagaalka sharci ee Apple iyo dawladda Mareykanka uu dhammaaday maxaa yeelay horeyba ...
Taylor Swift wuxuu seddex jibaaray guusha Drake ee Apple ad
Drake, Farshaxanka Waqooyiga Ameerika ayaa arkay iibka hal-laabkiisa saddex-laab ah mahadnaqa wada-hadalka u dhexeeya Taylor Swift iyo Apple.
Obama ma taageeri doono sharciga kahortaga sirta
Aqalka Cad ma taageeri doono sharci ka hor imanaya sirta. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, hoggaamiyeyaasha guddiga ...
FBI waxay iibsatay qalab lagu furo iPhone 5c (mana shaqeynayso 5s kadib)
FBI-da ayaa xaqiijisay inay soo iibsatay qalab lagu furo furaha iPhone 5c ee toogte ah isla markaana aysan la shaqeyn iPhones 5s iyo kadib.
Runkeeper, dhammaystir buuxa marka uu socdo
Runkeeper ayaa sii wadaya inuu si guul leh u cusbooneysiiyo waxaana lagu dhajiyay inuu yahay mid ka mid ah codsiyada ugu xiisaha badan dhamaan orodyahanada la socda iphone-kooda
Miisaska Apple Campus 2 wuxuu noqon doonaa 5.5m "Pods"
Xerada Apple Campus 2 waxaa laga soo hindisay meel hoose oo mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee ay ku jiri doonto ay noqon doonto "Pods iskaashi", qaar ka mid ah miisaska 0m.
Cusbooneysiinta Facebook ee soo socota waxay dadka indhoolayaasha u sheegi doontaa inay ogaadaan waxa ka muuqda sawirrada ka muuqda Jadwalkooda.
Apple waxay xisaab kale ka furaysaa Twitter, markan si kor loogu qaado Apple News
Apple wuxuu sii wadaa inuu kobciyo joogitaankiisa warbaahinta bulshada. Xisaabaadka dhowrka ah ee uu ku leeyahay Twitter-ka, waxaa ku soo biiray mid ka mid ah dhiirrigelinta Apple News.
Laga bilaabo maanta, WhatsApp wuxuu dhammeyn-dhammaanayaa sir doonaa dhammaan isgaarsiintaada
WhatsApp ayaa raacday wadadii Apple waxayna maanta ku dhawaaqday in ay ku soo dari doonto sir ilaa dhammaad dhammaan isgaarsiinta.
Apple waxay iibin kartaa wax ka yar 200M iPhones sanadka 2016
Sida laga soo xigtay falanqeeyaha KGI Ming Chi Kuo, Apple wuxuu iibin doonaa in ka yar 200 milyan oo iPhones dhammaan sannadka 2016. Ma iibka iPhone ayaa intaas hoos u dhigi doona?
Dib-u-eegista Dacwadda Hargaha ee Mujjo ee iPhone 6s Plus
Dacwadda maqaarka ee Mujjo ee iPhone 6s iyo 6s Plus waxay ku siineysaa badbaado wanaagsan oo leh dhammaystirka heerka koowaad iyada oo ay ugu wacan tahay maqaarkeeda oo lagu daray polycarbonate
Waad ku mahadsan tahay xeelad xariif ah waxaan ka dhigi karnaa nidaamka laftiisa nadiifinta feylasha ku meel gaarka ah ee codsiyada sidaasna ku soo ceshano boos bannaan.
Apple waxay daabacday laba fiidiyow oo aan ku arki karno Dillan, oo ah wiil autistic ah oo la xiriiri kara deegaankiisa mahadnaqa iPad-kiisa.
Google wuxuu u soo bandhigayaa SDK cusub macruufka Kartoonada iyo daawadeyaasha VR bogagga shabakadda
Google waxay sii deysay Kaarboorka Google SDK ee loogu talagalay iOS, iyo mid kale oo loogu talagalay waxa ay ugu yeereen VR Viewer kaas oo awoodi doona inuu ku soo daro waxyaabaha ku jira bogagga internetka.
Warbixinta khadka Apple ee 2016 wuxuu diirada saarayaa xuquuqda shaqaalaha
Apple waxay soo saartay warbixin cusub oo ay kaga hadlayso shaqada silsiladdeeda iyo xuquuqda shaqaalaha.
FBI-da ayaa ka caawin doonta dacwad ooge inuu furo labo qalab oo kale oo iOS ah
FBI-da ayaa balan qaaday inay ka caawin doonaan Qareenka degmada Arkansas furitaanka iphone iyo iPod oo ku lug lahaan kara kiis dil ah.
Cowen sidoo kale wuxuu u maleynayaa in iPhone uu isticmaali doono shaashadda OLED sanadka 2017
Xanta ku saabsan in Apple ay u isticmaali doonto bandhigyada OLED ee iPhone-ka sii wacaya isla markaana falanqeeye ka tirsan Cowen & Company ayaa sidaas u maleynaya 2017 sidoo kale.
Ku dar Foormula 1 hal sano oo dheeri ah barnaamijka rasmiga ah
Raac Formula 1 si faahfaahsan oo ku saabsan iPhone-kaaga oo leh macluumaad ku saabsan xilliga iyo dhammaan faahfaahinta tartamada waqtiga dhabta ah
Foxconn waxay xaqiijineysaa iibsiga Sharp $ 3.500 bilyan
Shirkadda Foxconn ayaa xaqiijisay iibsiga shirkadda loo yaqaan 'Sharp' oo lagu iibsaday 3.500 milyan oo doolar si loo soo saaro loona ururiyo qaybo badan oo ka mid ah iPhone-ka.
Iyada oo ku saleysan koodhka isha, OS X waxaa loo beddeli karaa macOS
Iyada oo ku saleysan koodhka isha ee nidaamka hawlgalka kumbuyuutarka Apple, OS X waxaa loo magacaabi doonaa macOS mustaqbalka. Ma arki doonaa xagaagan?
Waxaan ku tusineynaa sida aan u shaqeyn karno wicitaanada laga helo iPad ama Mac markay naga soo wacaan iPhone-ka
Sida aan ku arki karno bogga maalgashadaha Apple, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa bixin doonta xog ...
Waxaan ku tusineynaa sida loo dejiyo higaadka higaadaha ee iPhone iyo iPad. Sideed u rakibaysaa gawaarida tooska ah ee Catalan? Sidee loo bakhtiiyey? Soo ogow.
Disney, oo xulufada la ah Gameloft, ayaa noo keenay kulankaan cajiibka ah kaas oo aan ku abuuri karno baarkin madadaalo ee riyadayada iyo iPhone-ka.
FBI-da ayaa xaqiijineysa inay soo gashay iPhone-ka, kana laabatay kiiska
FBI-da ayaa shaacisay inay ku guuleysatay furitaanka aaladda IOS ee ku lug lahayd qaraxyadii San Bernardino.
Batman v. Superman: Ayaa guuleysan doona? horeyba ugu jirtay App Store
Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo ku saabsan Batman v. Superman: Yaa guuleysan doona, codsigii ugu dambeeyay ee ka yimaada gacanta filimka oo ah orod aan dhammaad lahayn.
Falanqeeyayaashu waxay saadaalinayaan soo noqoshada naqshada iPhone 4
Apple waxay si farxad leh nooga yaabi doontaa sanadka 2017 iyadoo la soo celinayo mid ka mid ah nashqadihii ugu quruxda badnaa ilaa maanta, soo celinta muraayadda iPhone 4.
Apple waxay daabacdaa lacag loogu talagalay macruufka kor loogu qaado tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo dib u warshadeynta
Apple ayaa daabacday qaar ka mid ah waraaqaha waraaqaha ee kor u qaadaya nadiifinta, tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo dib u warshadaynta iyada oo loo daneynayo deegaanka.
Sony waxay keeneysaa ciyaaraha PlayStation ee iOS iyo Android
Akhbaar wanaagsan oo loogu talagalay cayaartoyda: Sony waxay u keeni doontaa ciyaaraha PlayStation qalabka iOS iyo qalabka Android. Miyay ku qaadan doontaa iyaga tvOS sidoo kale?
Fiidiyowga qodobka ugu dambeeyay ayaa hadda laga heli karaa YouTube
Qodobka ugu dambeeyay ee Apple soo saartay iPhone SE iyo 9,7-inch iPad Pro ayaa hadda laga heli karaa YouTube.
Ku raaxayso fiidiyowyada nuxurka
Intii aan ku guda jirnay muxaadarada waxaan awoodnay inaan aragno dhowr fiidiyow, oo qaarkood aan kusoo aruurinay maqaalkan.
Apple waxaa laga yaabaa inay xiiseyneyso Teknolojiyada khiyaaliga ah, laakiin waxay si cad u diidaan danahooda
Apple waxay sii wadaa iibsashada shirkadaha u oggolaanaya inay horumariso alaabteeda iyo adeegyadeeda. Xiga wuxuu noqon karaa Teknolojiyada Khayaaliga ah.
Sida dib loogulaabo iOS 9.3 ilaa iOS 9.2.1 (Downgrade) halka Apple wali saxiixeyso iOS 9.2.1
Apple waxay sii wadaa inay saxiixdo (muddo gaaban) macruufka 9.2.1 kadib markay siidaysay macruufka 9.3, waxaan kaa caawinaynaa inaad dib ugu laabato intaad waqtiga haysato (hadaad tahay).
Dhacdadii 21-kii Maarso waxay bilaabmaysaa: «Aynu idinku dhex-galno»
Sidii caadada u ahayd, dhacdadii 21-kii Maarso waxay ku bilaabatay nooc ogeysiis gaagaaban ah, 40s in ...
Ciyaarta Pokémon Go waxaa lagu arki karaa fiidiyow
Ciyaarta Pokémon Go waxaa lagu soo bandhigay fiidiyoow waxyar kadib demo SXSW 2016. Ma runbaa mise waa been abuur?
Kuwani ma noqon doonaan EarPods hillaac ah oo la imaan doona iPhone 7? [UPDATED]
War xun ayaa u leh kuwa doonaya inay sii wataan adeegsiga dekedda dhegaha ee 3.5mm: iPhone 7's Lightning EarPods ayaa la daadiyay
Kiiska ugu fiican ee waxqabadka badan oo ugufiican iPhone-kaaga
Kiiskani wuxuu hayaa wax kasta oo aad ugu baahan karto qalab ahaan nolol maalmeedkaaga. Kani waa "Mindi Ciidanka Switzerland" oo galka ku duuban.
Teknolojiyaddu waxay beddeleysaa waxyaabo badan oo ku saabsan caafimaadka, nala baro waxa mustaqbalku inagu haayo iyada oo ay ugu wacan tahay qalabkeenna.
Podcast 7 × 03: Waxaa ku dhex qarxay xogaha iyo xanta
Qeybta seddexaad ee xilli ciyaareedkaan toddobaad waxaan ka hadleynaa wax kasta oo ku hareeraysan iPhone 5 SE, nuxurka Isniinta, ciyaaraha ku saabsan iOS iyo waxyaabo kaloo badan.
Maxkamad Jarmal ah ayaa ka soo horjeesatay Apple si qaldan u isticmaalida shatiyada baahinta
Waxay u muuqataa in kooxda qareennada Apple ee gacanta ku haya dacwadaha patent-ka aysan sidaas ahayn ...
WhatsApp ayaa lagu cusbooneysiiyay warar xiiso leh markale
Cusbooneysiintu waxay diirada saareysaa ku darida astaamo cusub iyo si rasmi ah ugu dhawaaqida astaamo kale oo horeyba loo heli jiray ama aan horeyba u dareemay.
Jay Z wuxuu ka saarayaa Apple Music iyo Adeegyada kale ee Muusigga ee Muusikada 'Blueprint Trilogy'
Rapper iyo milkiilaha Tidal Jay Z ayaa ka saaray albumskiisa Blueprint adeegyada muusikada badankood,…
Slack for iPhone iyo iPad ayaa lagu cusbooneysiiyay waxyaabo badan oo cusub
Slack for iPhone iyo iPad ayaa helay cusbooneysiin weyn oo leh astaamo iyo xalal badan oo cusub.
TSMC iyo lammaanaha ARM si ay u abuuraan processor 7nm ah, laga yaabee iPhone 8
Haddii xantaasi run tahay, TSMC waxay noqon doontaa soo saaraha dhammaan processor-ka A10 iyo iskaashi lala yeesho ARM wuxuu naga dhigayaa inaan u maleyno inay sidaas noqon doonto goor dambe.
Lumino City, qiimo dhimis iyo muhiim isla waqtigaas
Lumino City waxay noqotay mid mudnaanteeda leh mid ka mid ah tixraaca ciyaaraha indie ee waaxda waxayna hadda ku iibineysaa App Store
Gene Munster: "Gaariga Apple waxaa ku kici doona $ 75.000"
Gene Munter oo sanado badan saadaalinaayay TV-ga Apple ayaa sheegay in gaariga Apple uu qiimahiisu gaarayo ilaa $ 75.000.
WhatsApp wuxuu noqon karaa bartilmaameedka xiga ee FBI
Barnaamijka ugu ballaaran ee loo isticmaalo farriinta adduunka, WhatsApp wuxuu noqon karaa bartilmaameedka amniga qaranka ee soo socda ee FBI.
Ku dhowaad 9 bilood ka dib, Apple Music wali wax badan baa laga hagaajiyaa
Waxaan ahaa qof si daacad ah u adeegsada Apple Music tan iyo markii la bilaabay, waa inaan dhaho waxaan ka faa'iidaystay ...
Haddii FBI-da ay guuleysato, waxay Apple weydiisan kartaa macruufka ilaha ilaha
FBI-da ayaa umuuqata inay xanaaqsan yihiin, hadii Apple ay diidaan inay abuuraan albaabada gadaashiisa oo ay lumiyaan, waxay shirkada weydiisan doonaan koodhka isha ee IOS.
Sidii aan fileynay, Apple waxay baahin doontaa dhacdada 21-ka toos
Maaha wax lala yaabo weyn: Apple waxay baahin doontaa munaasabada ay qorsheeyeen 21-ka Maarso oo toos ah waxaana ka arki karnaa Mac, iOS iyo Windows.
Iibinta Dahabka Apple Watch waa ka mamnuuc Spain
Apple waxay Spain kala kulantay dhibaato aysan ka fikirin. Soo saare kasta ama ganacsi kasta oo doonaya inuu suuq galiyo ...
Kodi 17 ee Apple TV 4 waxaa lagu cusbooneysiiyay sawir cusub iyo waxqabad wanaagsan
Ilaa dhowaan, Kodi waxaa loo yaqaan 'XBMC'. Muddo dheer ayaan wax ka ogaa jiritaankeeda, laakiin ma aanan aqoon sida looga faa'iideysto ...
Patent wuxuu u rogi lahaa Apple Watch nidaam digniin deg deg ah
Xuquuqda Apple ee cusub waxay qeexaysaa nidaam ay Apple Watch uga digtoonaan karto xaaladaha degdegga ah haddii aan dhibaato caafimaad qabno.
Periscope wuxuu ku guuleystey Isbaanishka Isbaanishka mahadsanid Piqué
Periscope waa codsi uu Piqué (daafaca dhexe ee Fútbol Club Barcelona) u adeegsaday dhowr toddobaad.
Eddy Cue wuxuu ka baqayaa in gobolada ay isha nagu hayaan hadii FBI-da ay ku guuleysato kiiska
Kaligiis kali maahan, laakiin Eddy Cue, VP-ga Apple, wuxuu kiciyey walaac ah in gobolladu ay isha nagu hayn karaan haddii FBI-da ay ku guuleysato kiiska hadda.
Halyeeyga Jailbreak GeoHot wuxuu helayaa maalgalinta baabuurkiisa iskiis loo maamulo
GeoHot, oo caan ku ah goobta JAILBIL ama sameynta wax la mid ah PS3, ayaa helay dhaqaale lagu abuuro gaarigeeda iskiis u shaqeynaya.
Sacha Baron Cohen waxaa ku dhiirrigeliyay muhiimada Apple si ay ugu dhiirrigeliso filimkeeda cusub
Tilmaamaha Apple ayaa noqday isha dhiirrigelinta xirfadaha. Sasha Baron Cohen maahan ...
Snowden wuxuu leeyahay codsiga FBI waa doqonimo; wuxuu sharxayaa sida looga boodo otomaatiga-tirtirka
Edward Snowden ayaa si xun ula dhaqmay FBI-da wuxuuna u sheegayaa sida ay uga dhaafi karaan tirtirka xogta otomaatiga ah.
CloudMagic, iimaylka cusub ee daruurta loogu talagalay macruufka
Waxaan falanqeyneynaa CloudMagic, oo ah musharraxa maamulaha emaylka inuu noqdo kan ugu fiican ee iOS, waxaan si taxaddar leh u tirinnaa faa'iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkeeda.
In kabadan 6000 xarumood oo shidaal ExxonMobil ah ayaa horey u taageeray Apple Pay
Tikniyoolajiyadda Apple waxay ku ballaaraneysaa, qaab ka duwan, iyada oo loo marayo in ka badan 6.000 oo saldhigyo shidaal oo ExxonMobil ah
5 warka Apple oo filaya xanta (iPhone 7 iyo iPhone OLED ayaa lagu daray)
Xanta ku saabsan wararka Apple waxay filaysaa in ka badan hal nooc oo iPhone ah oo si weyn u beddeli doona astaamaha iPhone 7.
Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa sida aan u adeegsan karno labada kamaradood sida ay sheegtay Apple
IPhone 7 wuxuu la imaan karaa laba kamaradood waxaana fiidiyowgaan ku arki karnaa mid ka mid ah siyaabaha aan ugu adeegsan karno.
FBI-da ayaa rafcaan ka qaadan doonta go’aanka maxkamada New York
Fulinta sharciga Mareykanka ayaa rafcaan ka qaadan doonta go'aanka maxkamadda New York ee ka horjoogsanaya inay furaan aaladaha dembiyada.
Patent-ka Apple wuxuu muujinayaa waxa ay ku isticmaali karaan Birta Liquid
Patent cusub oo hadda la siiyay Apple ayaa sharxi kara waxa ay u isticmaali doonaan Liquid Metal mustaqbalka marka laga reebo saxanka SIM.
Steve Wozniak ayaa mar kale taageeray Apple ka dhanka ah FBI-da wareysi uu siiyay TBS
Steve Wozniak ayaa mar kale ka hadlay iska horimaadka Apple iyo FBI-da wuxuuna sidaa u yeelay si uu markale u garab istaago shirkaddii uu la aasaasay ee Jobs.
Tim Cook wuxuu la kulmay maalqabeenno kale si uu ugala hadlo Donald Trump
Tim Cook wuxuu dhowaan la kulmay bilyaneero kale si uu ugala hadlo cawaaqibka ka dhalan kara guushii uu gaadhay musharraxa xilka madaxweynaha Donald Trump.
Apple waxay diyaarsatay iPhone leh shaashad 5.8 ″ AMOLED ee 2018 [RUMOR]
Sida laga soo xigtay war xan ah oo nooga imanaya Taiwan, Apple waxay diyaarinaysaa iPhone oo leh shaashad 5.8 inji ah oo ah AMOLED sanadka 2018.
Qandhada iibsashada iyo iibinta araajida iyo xayawaankeeda
Dukaanka 'App App' waxaan badanaa ka helnaa qandho mawduuc oo socota bilo badan, qaar xitaa ...
Lavabit: "Haddii FBI-du guuleysato, shirkadaha waxay ka carari karaan Mareykanka"
Xogta qarsoodiga ah ee Apple la leedahay FBI-da ayaa noqon karta dhibaato aragto shirkado ka cararaya dalka
Apple waa inay ku bixisaa $ 450M kiiska qiimaha e-Books
2013, Apple waxaa laga dacweeyay qiimeynta buugaagta dhijitaalka ah ee iBooks Store. Sidee tahay…
Sidii caadada u ahaydba, waxay dib u soo dejiyeen fiidiyoow xerada Apple ee Campus 2 oo muujineysa horumarka dhismaha ee hadda socda.
Suuqa loogu talagalay IPhone-yada la cusbooneysiiyay ayaa sidoo kale imaan doona Hindiya
Suuqa loogu talagalay iphone-yada la cusboonaysiiyay, oo ah sifooyin loo adeegsado aaladaha la cusboonaysiiyay, ayaa sidoo kale dhawaan India imanaya.
Apple wuxuu kordhin doonaa waxsoosaarka saddexda biloodle 10%
Ka dib khariidada loo dejiyay tan iyo 2012, Apple waxay kordhin doontaa macaashkeeda ilaa 10% waxayna dib u iibsan doontaa saamiyada qiimahoodu yahay 30.000 milyan oo doolar.
Aabbe Robert Palladino, oo u waxyooday nooca Mac, wuxuu ku dhintaa da'da 83
Calligrapher Aabaha Robert Palladino wuxuu ku dhintay da'da 83. Isagu wuxuu ahaa kii dhiirrigeliyay jumladda loo adeegsaday Macs-yadii hore.
Waxaan tijaabinay Baqbaqa Sumo-boodka Sumo, oo ah diyaarad drone-ka dhulka ah oo ay la socoto nafta sahamiyaha
Ku boodida Sumo waa sahmiye bilaa xiise leh, awood u leh inuu wajaho caqabad kasta oo uu ku maaweeliyo yar iyo weyn iyo khibrad la’aan.
France waxay u codeeysaa madaxda shirkadaha xabsiga ee difaacaya sirta xogta
Codbixintii ugu horreysay ee heerka ugu hooseeya ee Baarlamaanka Faransiiska waxay soo jeedinaysaa in la xiro maamulayaasha shirkadda ee difaaca sirta.
Intel wuxuu soo saari doonaa qayb muhiim ah oo ka mid ah LTE Modem-ka iPhone 7 chips
Intel, oo ah shirkadda caanka ah ee soo saaraha processor-ka, ayaa soo saari doonta qayb ka mid ah LTE Modem-ka iPhone 7, oo xawaare aad uga sarreeya kuwa hadda socda sameeya.
Sida laga soo xigtay UNHCR, wiiqida amniga macruufka ee iOS ayaa qatar gelin kara nolosha dadka
Waxaa jira dad badan oo naga mid ah oo difaaca arrimaha gaarka ah, laakiin UNHCR waxay sii wadaysaa iyadoo hubineysa in ku xadgudubka ay khatar gelinayso nolosha dadka.
Instagram ma ogola in lagu daro xiriiriyeyaasha Telegram iyo Snapchat
Ma ogin waxa ka socda madaxa Facebook. Shabakaddiisa bulshada ayaa ah tan ugu isticmaalka badan guud ahaan ...
Samsung ma taageerto Apple dagaalka ay kula jirto FBI. Ma jiraa qof la yaabay?
In kasta oo ay sheegto wax badan oo la mid ah Apple, haddana Samsung ma qaadanayso dhinaceeda garaaca ku haynta tufaaxa FBI-da, taas oo aan ahayn wax lala yaabo.
ACLU waxay kaloo Apple ka taageertaa dagaalka ay kula jirto FBI
Tan iyo markii uu Tim Cook qoray warqaddiisa si uu u difaaco asturnaanta isticmaalaha, qaar badan ayaa taageeray. Kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa ACLU.
Apple wuxuu furayaa koonto cusub oo lagu taageerayo Twitter
Apple waxay sii wadaa inay ku sii kordhiso joogitaankeeda warbaahinta bulshada. In kasta oo koontada @apple Twitter ay wali taagan tahay, oo laga yaabo ...
Apple wuxuu ku guuleystaa patent u oggolaan kara iyaga inay sameeyaan iphone jilicsan
AApple lama siinin hal, laakiin 54 patent toddobaadkan. Midkood ayaa u oggolaan kara shirkadda ...
Faahfaahinta patent-ka Apple waxay kaheli kartaa sameecadaha dhegaha leh ee fidi kara
Iyadoo maskaxda lagu hayo iPhone 7, Apple waxay xareyn laheyd patent-ka kumbuyuutaro isku dhafan oo Bluetooth ah oo lagu dhejin karo ama laga saari karo fiilada.
WhatsApp hadda way diri kartaa dukumiinti, koodhka ayaa muujinaya
WhatsApp wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dukumiinti ku dirto arjiga, hase yeeshe, ikhtiyaarkan wali kuma kicin koodhka.
Khariidadaha Google ayaa na siinaya suurtagalnimada in lagu daro joogsiyada jidadka
Google wuxuu sii wadaa inuu hagaajiyo arjiga khariidadaha maalinba maalinta ka dambeysa. Oktoobartii lasoo dhaafay khariidadaha adeegga shabakadda ...
TweetMaps wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku sahamiso isbeddellada khariiddada
TweetMaps waxaad kula socon kartaa dhammaan howlaha Twitter ee khuseeya qaab juqraafiyeed
Tim Cook wuxuu ku maadeystaa sawirkiisa xun ee Super Bowl ee kulanka saamileyda
Kulankiisii ​​uu la yeeshay saamileyda, Tim Cook wuxuu ku kaftamay sawirkii xumaa ee uu ka qaaday Super Bowl. Laakiin waa wax aad ku kaftami karto?
Qaadiga New York: Dowladdu kuma qasbi karto Apple inuu furo iPhone
Ujeeddada koowaad ee laga leeyahay Apple khilaafka ka dhex jira FBI-da: garsooraha New York wuxuu leeyahay Dowladdu kuma qasbi karto inay furaan iPhone-ka.
Apple waxay haysaa halkudhigga fikirka kaladuwan
Markuu Steve Jobs ku soo noqday Apple sanadkii 1997, waxa ugu horreeya ee uu sameeyay wuxuu ahaa hal-ku-dhig caan ah oo qof walba ...
Tesla wuxuu shaqaaleeyay qof kale oo weyn oo ka shaqeynayay jajabyada Apple
Isweydaarsiga shaqaalaha ee u dhexeeya Tesla iyo Apple ayaa socda. Markan waxay ahayd soosaaraha baabuurka ee uu saxeexay shaqaale kale oo Apple ah.
Steve Jobs ayaa ka dhammaaday Oscar, laakiin hambalyo, Leo!
Subaxnimadii hore ayaa la qabtay xafladii 88-aad ee Oscar mana jirin wax layaableh marka laga hadlayo jilaayaasha ugu fiican labka, laakiin waxaa jiray mid dumar ah.
Steve Jobs ma uusan dooneyn in carruurtiisu noqdaan iFans
Carruurta Steve Jobs ma aysan isticmaalin ipadka markii la soo saaray. Ma rabtaa inaad ogaato sababta ka dambeysa xiisaha qoyskan Shaqooyinka?
Faylasha Apple ayaa dhaqaajinaya inaysan abuurin "GovtOS"
Qeybtii ugu dambeysay ee Apple vs. FBI-da si loo ilaaliyo arimaha gaarka ah, shirkada uu maamulo Tim Cook waxay ...
Ulaha Selfie ayaa imanaya MacBooks
Waan ka xumahay, waan ogahay. Waxay ahayd wixii aan u baahnayn inaan aragno. Haddii aynaan ku filnayn kuwa jecel sawirada ...
IPhone 5se iyo iPad Pro daahfurka ayaa dib udhacay 22 Maarso [RUMOR]
Waxa ugu horeeya ee aan rabo inaan idhaahdo oo aan cadeeyo bilawgooda waa inay xan tahay. Aniga ahaan, waa ...
Soo-saaraha barnaamijka farriinta ugu amniga badan ee ay saxiixday shirkadda Apple
Apple wuxuu sii wadaa inuu ku sharaddeeyo amniga, sida lagu muujiyey saxiixa Signal, mid ka mid ah codsiyada fariimaha ugu ammaan badan ee jira.
Tim Cook: "abuuritaanka albaab dambe wuxuu u dhigmaa kansarka ku jira software-ka"
Sida laga soo xigtay agaasimaha guud ee Apple, softiweerka ay FBI-da rabto in shirkadda tufaaxa la abuuro wuxuu noqon lahaa kansar software oo leh cawaaqib xumo.
Apple waxay soo bandhigtay Force Touch oo ay leedahay Apple Watch waxayna kuqaan gareeysay iphone's 3D Touch, laakiin waxaa la gaaray waqtigii ay waxbadan qaban laheyd
Shirkadda Tesla waxay ka kireysatay injineerada qalabka shirkadda Apple
Elon Musk wuxuu had iyo jeer doonayaa inuu naftiisa ku hareereeyo sida ugu fiican, waana taas sababta uu labo injineer uga kireystay shirkadda Apple.
Falcelinta Facebook hadda waa mid rasmi ah oo qof walba heli karo
Sugiddii way dhammaatay. Dareenka Facebook hadda waa rasmi, sidaa darteed waxaan hadda isticmaali karnaa badhanno dheeri ah marka lagu daro caanka ah "Like".
Samsung waxay ku cadaadineysaa Apple inay ka bedesho shaashadda una wareejiso OLED
Xitaa iyada oo aan xitaa loo iibineynin suuqa, Samsung Galaxy S7 iyo tayadiisa ayaa horeyba ...
Apple wuxuu furayaa "Podcasts Connect" si uu u maareeyo Podcasts
Haddii aad tahay abuure Podcasts oo aad badanaa u soo geliso iTunes, hubaal waad ku farxi doontaa inaad ogaato in Apple ay bilawday "Podcasts Connect" si ay si fiican u maamusho.
Telegram waxaa lagu cusbooneysiiyaa wararka si loogu dabaaldego 100 milyan
Telegram wuu sii cusbooneysiinayaa, waxaan ku tusineynaa wararka cusbooneysiinta ugu dambeysay.
Apple waxay dooneysaa in Koongarasku go'aan ka gaadho sirta khilaafkeeda FBI
Apple waxay dooneysaa in Koongareeska Mareykanka laga helo erayga ugu dambeeya ee murankooda FBI-da ee ku saabsan sirta iPhone 5c.
Stack, abuurkii ugu dambeeyay ee abuurayaashii 2048
Ka mid ah jahwareerka ciyaaraha ka dhex jira App Store ayaa u muuqda neef kale oo hawo nadiif ah leh xusuus gaar ah oo ku saabsan guulaha kale ee dhawaanta
Ma dejin doonto tusaale, kaas oo ah: Waaxda Caddaaladda waxay rabtaa inay furto 12 iPhone oo dheeri ah
Ma dejin lahayn tusaale, maya. Taasi waa sababta Waaxda Caddaaladda ee Mareykanku ugu talagashay inay ku furto 12 taleefannada iPhone ka sokow kan ku yaal San Bernardino.
Sidee labada kamaradood ee iPhone 7 u shaqeyn karaa [fiidiyow]
Waxay noqon doontaa wax lala yaabo haddii iPhone 7 uusan la imaan laba kamarad. Ma jeclaan lahayd inaad ogaato sida sawirradu noqon doonaan? Daawo video-ga oo nadiifi shakigaaga.
IBM waxay u keeni doontaa luqadda barnaamijka Swift daruuraha
Luqadda barnaamijka ee ay soo saartay Apple laba sano ka hor waxay leedahay xulafo cusub: IBM. Shirkadaha cadawgii hore ee Jobs waxay qorsheynayaan inay u adeegsadaan daruuraha.
Dhibbanayaasha San Bernardino waxay FBI-da ka taageeraan khilaafka kala dhexeeya shirkadda Apple
Ma ahan inay naga yaabiso, maxaa yeelay waa waxa ugu dabiiciga ah ee la sameeyo. Xubnaha qoyska dhibanayaasha waxay FBI-da ka taageeraan muranka ka dhanka ah Apple ee ku saabsan asturnaanta.
FBI-da ayaa ku adkeysaneysa in Apple ay caawiso xitaa haddii ay bedelaan Aqoonsiga Apple
Kiiska Apple v. FBI, waana in Waaxda Caddaaladda ay ku adkeysaneyso in Apple ay caawiso xitaa haddii ay bedeleen Aqoonsiga Apple.
Tani waa waxa "i" ku jira alaabada Apple macnaheedu yahay sida uu qabo Steve Jobs
Ma ogtahay waxa loola jeedo "i" horteeda wax soo saarka Apple qaarkood? Steve Jobs wuxuu leeyahay sharraxaad u gaar ah, macnaheeduna waa dhowr waxyaalood oo isku mar ah.
IPhone 5se si dhib leh ugama keento warbaahinta, waa maxay sababaha? Waxaan falanqeynay xaaladeeda bil ka hor bilowgeeda.
Apple waa markale shirkada ugu caansan sanadka sagaalaad oo xiriir ah
Hal sano oo dheeri ah, hadana waxaa jira sagaal isku xigta, Apple waxaa loo magacaabay shirkada loogu qadarinta badan yahay meeraha ka hor tartanka weyn, iyo kuwa kale.
Steve Wozniak: "Ma aamini karno dowladda"
Steve Wozniak, oo ah aasaasaha Apple, ayaa sidoo kale ka hadlay kiiska toogashada. Miyaad noqon doontaa ama ka soo horjeedaa shirkadda aad aasaastay?
Microsoft sidoo kale waxay kubiirtaa Apple iyadoo doorbideysa asturnaanta adeegsadaha
Apple waxay sii wadaa inay taageero ka hesho duulaankeeda ka dhanka ah FBI-da iyadoo loo daneynayo asturnaanta adeegsadaha. Kii ugu dambeeyay ee muujiyay taageeradooda wuxuu ahaa Microsoft.
IPhone-ka mustaqbalka ayaa awood u yeelan kara inuu akhriyo luqadda dhagoolayaasha
Apple waxay shatiyadeysaa nidaamka aqrinta 3D kaas oo u oggolaan kara iPhone ama qalab kasta inuu akhriyo luqadda calaamadaha. Ma ku arki doonnaa iPhone 7?
Snowden ayaa sheegay in kiiska amaanka Apple ee FBI-da uu yahay kii ugu weynaa tobankii sano ee la soo dhaafay
Ma dhahayno; Wuxuu yidhi Snowden: Difaaca Apple ee asturnaanta FBI-da ayaa ah kiiska ugu muhiimsan ee xagga amniga tobankii sano ee la soo dhaafay.
Waxay saf ugu jiraan Bakhaarka Apple hortiisa si ay u taageeraan Tim Cook iyaga oo doorbidaya asturnaanta
Isticmaalayaasha Apple saf uma galaan inay iibsadaan iPhone-kii ugu dambeeyay. Hadda waxay sidoo kale u sameeyaan si ay u taageeraan Tim Cook oo ka dhan ah FBI-da.
Waxaan ku dhejineynaa Xiaomi Mi 20.000mAh tijaabada, batteriga ugu fiican uguna macquulsan ee qalabkaaga
Waxaan falanqeyneynaa Xiaomi Mi 20.000mAh, batteriga dibadda ee caqliga leh kaas oo kuu oggolaan doona inaad ka qaadatid iPhone 8s 6 jeer XNUMX ka hor intaadan u baahnayn baal mar kale.
Apple waxay sameysay 21% processor-yada casriga ah sanadkii 2015
Apple kaliya waxay soo saartaa Processor-yada lafteeda, laakiin sanadkii 2015 waxay suuq ku laheyd 21% SoC dhanka taleefannada casriga ah iyo 31% kiniiniyada.
Dhulgariirkii Taiwan wuxuu waxyeello u geeystay TSMC in ka badan sidii markii hore loo maleynayay
TSMC wuxuu noqon doonaa midka sameeya dhamaan processor-ka iPhone 7, illaa iyo inta ay dayactirayaan waxyeelada ka soo gaadhay dhulgariirkii dhacay 6-dii Febraayo.
Taraafikada Maya!, App ah in laga feejignaado shucaacyada waddooyinka
Ka faa'iideyso anti-radar-kaaga iPhone-ka oo leh codsigan kaa digaya dhammaan shucaacyada joogtada ah iyo kuwa wareega
AT&T wuxuu bilaabaa tijaabinta 5G: 10 ilaa 100 jeer ka dhakhso badan LTE
Ma LTE ama 4G ayaaba imanaya xaafadaada? Haa? Miyaad u malaynaysaa inay ku filan tahay dhakhso? Hagaag, AT & T waxay bilaabi doonaan inay tijaabiyaan shabakadooda 5G xawaaraha wadna xanuunka inta lagu jiro sanadka 2016.
Fiidiyow aan la aqoon oo ka tirsan Steve Jobs oo soo bandhigaya kombuyuutarka NeXT
Ma u malaynaysaa inaad aragtay dhammaan Steve Jobs? Hagaag, halkan waxaad kuheysaa muuqaal fiidiyow ah markii agaasimihii hore ee Apple soo saaray kombiyuutarka NeXT sanadkii 1988.
Serato Pyro, isku darka muusikada caqliga badan ayaa u imanaya macruufka
Isku-dhafka muusikada Smart, Spotify-isku-dhafan ayaa u yimid macruufka halyeeyga Serato iyo barnaamijkiisa Pyro.
Apple waxay wajaheysaa dacwad kale, markan ku xadgudubka patentka 3D Touch
Apple ayaa wajahaysa dacwad cusub. Munaasabaddan awgeed, shirkad ayaa sheegatay in 3D Touch ee iPhone 6s iyo 6s Plus uu ku xadgudbayo saddex ka mid ah shatiyadeeda.
Keen, codsiga noo sheegaya nooca ey ee leh sawir
Microsoft in muddo ah hadda waxay maaraynaysaa inay ballaariso dhammaan nidaamka deegaanka ee codsiyada dhammaan barnaamijyada moobiilka ...
Google Wuxuu Ka Tagayaa Xayeysiiska Flash
Sannadkii hore wuxuu ugu darnaa Flash. 2015, nuglaansho aad u tiro badan ayaa lagu ogaadey nidaamka la abuuray ...
Baadi 53: wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato qaladkan dhimashada ah
Khalad 53 ayaa hada saaran qof kasta bushimahiisa mana aha wax lala yaabo. Halkan waxaad ka ogaan doontaa waxa ilaa hadda laga ogyahay qaladkan halista ah.
Apple waxay kula talineysaa horumariyeyaasha inay rakibaan shahaadada cusub
Dhibaatooyin taxane ah ka dib Nofeembartii hore markii laga soo degsanayo codsiyada dukaanka arjiga ee ...
Ruushka ayaa doonaya inuu ku qasbo Apple iyo Google inay bixiyaan VAT dheeraad ah
Ruushka ayaa doonaya inuu ku qasbo shirkadaha waaweyn sida Google iyo Apple inay bixiyaan VAT dheeraad ah, waana wax la ogaan karo marka laga iibsanayo codsiyada App Store.
MSQRD waxay ku siineysaa daraasiin filtarro animated ah oo loogu talagalay iPhone-kaaga
MSQRD waa codsi rasmi ah oo aad uga faa'iideysan karto iPhone-kaaga adoo adeegsanaya miirayaal firfircoon oo sawirro iyo fiidiyowyo ah
Soo bandhigida aaladda la qabatimay ciyaaraha iPhone
Robot-kan ayaa awood u leh inuu ciyaaro ciyaaro aan kala joogsi lahayn isla markaana uu sameeyo isku-dhaf la yaab leh oo ku saabsan ciyaaro badan oo macruufka ah, iyo sidoo kale inuu qoro oo uu fuliyo amarrada codka.
Apple wuxuu sameeyaa jaangooyooyin Swift ah ilo furan
Waxyar ka dib markii luuqada barnaamijku ka dhigtey il furan, Apple sidoo kale waxay samaysay iridda aasaaska u ah ilaha furan.
Google wuxuu ku siinayaa 2 GB Drive-ka si loogu dabaaldego maalinta Internetka oo nabdoon
Maalinta Caalamiga ah ee Badbaadada Internetka waxay dhiirrigelisaa isticmaalka mas'uuliyadda iyo amniga ee tiknoolajiyada cusub inta badan carruurta ...
Khibradeyda aan ku leeyahay macruufka 9.3 betas illaa iyo hadda
Tani waa khibrada isticmaale ka dib dhowr toddobaad adoo isticmaalaya macruufka 9.3 iyo dhammaan betaskeeda illaa hadda.
Apple wuxuu ka hadlayaa qaladka 53: waa inuu ilaaliyo macluumaadkeena
Apple waxay ka jawaabtaa dhaleecaynta loo soo helay qaladkii caanka ahaa ee hada 53. Jawaabtaadu macno ayey samaynaysaa, laakiin miyay u fiicantahay macaamiishaada?
Apple wuxuu ku saxan yahay midabka iPhone 5se
Apple wuxuu isticmaali lahaa midabka hadda jira ee iPhone 5se cusub si uu uga dhigo mid soo jiidasho leh dhagaystayaasha guud.
Apple waxay la shaqeyn kartaa Energous si loogu isticmaalo amarka dhabta ah ee wireless-ka ee mustaqbalka iPhone
Apple waxay iskaashi la yeelan kartaa shirkadda Energous si ay ugu keento amarka dhabta ah ee wireless-ka iPhone-ka mustaqbalka. Ma ku arki doonnaa iPhone 5e ama iPhone 7?